UGAAR AH DUMARKA: Calaamadahan Haddii Aad Ku Aragto Ninkaaga Isagoo Kale Lama Helo - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»UGAAR AH DUMARKA: Calaamadahan Haddii Aad Ku Aragto Ninkaaga Isagoo Kale Lama Helo
UGAAR AH DUMARKA: Calaamadahan Haddii Aad Ku Aragto Ninkaaga Isagoo Kale Lama Helo
Waxaa la rabaa in lamaanaha ay had iyo jeer isku sheegaan jacaylka mid walba uu kan kale u qabo inta uu la egyahay. Ragga badankood wayku adagtahay inay xaasaskooda dhahaan “Waanku Jeclahay”.
Waa kuwaan 5 sifo oo lagu garto in ninkaaga uu ku jecelyahay xittaa haddii uu mar dhif dhif ah ku dhaho waanku jeclahay.
1. Waad ogtahay ninkaaga waaku jecelyahay haddii wax walbo iyo qof walbo adiga kaa hormariyo.
2. Waad ogtahay ninkaaga waaku jecelyahay haddii uu shaqsi ahaan kuu xushmeeyo.
3. Ninkaaga waaku jecelyahay haddii uu necebyahay inuu ku arko adigoo murugeysan isla markaana uu sameeyo wax kasta uu kaaga qosolsiiyo.
4. Seygaaga waaku jecelyahay haddii uu isticmaalo jumladda ah “Anaga” intii uu isticmaali lahaa “aniga”. Sababta uu tan u isticmaalayo ayaa ah wuxuu kuu arkaa qeyb kamid ah noloshiisa.
5. Waad ogtahay in ninkaaga ku jecelyahay haddii mar walba uu waqti kuu sameeyo dhib malahan si walba uu mashquul u yahay.
6. Waaku jecelyahay haddii uu ku daryeelo dareen gaar ahna kusiiyo markaad xanuunsantahay.
7. Wuuku jecelyahay seygaaga haddii uu kuu arko haweeneyda dunida ugu quruxda badan.
8. Jacayl ayuu kuu qabaa haddii uusan hilmaamin waxyaabaha yar yare e aad usheegto eek u dhiba.
9. Waad ogtahay inuu ku jecelyahay haddii uu qiimeeyo aragtidaada iyo fekerkaaga mar walbana uu rabo fekerkaaga kahor inta uusan go’aan qaadan.
10. Waad ogtahay inuu ku jecelyahay ninkaaga haddii uu qadariyo saaxiibadaa iyo qoyskaaga.